३५ बुँदे माग राखेको समाचार सरासर गलत होः उपेन्द्र यादव | langtangnews.com
सरकारसँगको वार्ता नाटक भइरहेको छ
संविधानमा समावेश भएका विभिन्न विषयमा असहमति राखेर आन्दोलन गरिरहेको मधेसी मोर्चासँग सरकारले वार्ता गरिरहेका छ। आन्दोलनरत मोर्चाको एक घटक संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकार र मधेसी मोर्चाबीच भइरहेको वार्तामा उल्लेख्य प्रगति हुन नसेको बताएका छन्। यादवसँग सेतोपाटीका भानुभक्तले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
सरकारसँगको वार्ता कस्तो भइरहेको छ र कहिले निष्कर्षमा पुग्छ?
यादव ः वार्ता नाटकजस्तो भइरहेको छ, निष्कर्षमा कहिले पुर्याउने भन्ने कुरा सरकारको हातमा छ।
तपाईहरूका ३५ बुँदे मागमा मुख्य माग के के हुन?
यादव ः हामीले सरकारसँग राख्नका लागि कुनै पनि बुँदा तयार पारेका छैनौं। मोर्चाले ३५ बुँदे माग राख्ने भन्ने समाचार सरासर गलत हो। हामीले त सरकारलाई यसअघि भएका २२ र ८ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न भनेका हौं, सेना फिर्ता गर्न, दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा फिर्ता गर्न, मारिएकालाइ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र घाइतेलाई निःशुल्क उपचार गर्ने सर्त राखेका हौं। २२ र ८ बुँदे सम्झौता त्यो कार्यान्वयन भयो भने हामी धेरै कुरामा मिलाउन सक्छौं।
आन्दोलनमा दसगजा क्षेत्रमा बस्ने र भारतीय भूमिबाट प्रहरीलाई ढुंगा हान्ने जस्ता घटना हुनु जायज हो?
यादव ः नाकामा गएर बसेका नेपाली हुन्। प्रहरीले धपाएपछि उनीहरु कता जाउन त? अहिलेको महत्वपूर्ण कुरा दसगजामा मानिसहरू किन बसेका छन् भन्ने होइन, उनीहरुलाई दसगजामा बस्न किन बाध्य पारियो भन्ने हो। अहिले मधेस आन्दोलनमा भारतीय हात रहेको देखाउन विभिन्न हौवा फैलाइएको छ। आन्तरिक समस्या समाधान नगरी ध्यान अन्तै मोड्ने र मधेसलाई दमन गर्ने नीति सरकारमा बसेकाले अपनाएका छन्।
केही दिन अघि भारतीय विदेश मन्त्रालयले सीमा सूचारु गर्न आफ्ना सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको थियो। नाकाबन्दी मोर्चाले गरेको हो कि भारतले?
यादवः सीमामा गएर बस्ने भारतीयहरु हुन् र? ती मधेसी हुन्। मधेस नेपालभित्रै पर्छ। भारतले त अस्ति नै सीमा सुचारु गर्न भनिसकेको छ। धर्नामा बसेका हाम्रा कार्यकर्तालाई भारतीय सीमा सुरक्षा बलका जवानले रुपडिया र सुनसरीमा कुटपिट गरेका छन्। अनि कसरी भारतले नाकाबन्दी गर्छ। नाकाबन्दी हामीले गरेका हौं।
दसैं, तिहार र छठ पर्व नजिएका छन्। सरकारसँगको वार्ता निष्कर्षमा नपुगे पनि चाडबाडका लागि नाका खोल्नुहुन्छ?
यादवः हामीले किन चाडबाडका लागि नाका खोल्ने? सरकारले ४० जना मधेसीलाई मारेर संविधान जारी गरेको हो, अरु सय ढेडसय मारेर दसैं तिहार मनाए हुन्छ। ‘दासत्वको जीवन बाँच्नुभन्दा मर्नु वेस’ भनेर हिँडेका हामीलाई दसैं तिहारको के अर्थ हुन्छ र?
के गर्यो भने समस्याको चाँडो समाधान होला त?
यादवः अहिले तीन दलका ५–६ जना नेताहरुमा मधेस विरोधि राष्ट्रियता उग्र भएर आएको छ। पञ्चायतकालमा प्रजातन्त्रका लागि हामीले आन्दोलन गर्दा पनि त्यतिबेलाको सरकारले यस्तो निरंकुशता देखाएको थिएन। अहिले त कोही मधेसी मूलको मानिस देख्यो कि इण्डियन भनिहाल्ने गरिएको छ। तीन दलका नेतासँग अरु विचार सकिएर हो कि उहाँहरु मधेस विरोधी राष्ट्रियता बोकेर राजनीति गरिरहनु भएको छ। उहाँहरुले त्यो मानसिकता त्यागेर मधेसी पनि नेपाली जनता नै हुन उनीहरुको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर वार्ता गर्नुभयो भए भने चाँडो सहमति हुन्छ।